पैदलयात्री लेनको व्यवस्था - Pradesh Today
Homeविचारपैदलयात्री लेनको व्यवस्था
सवारी दुर्घटनामा नागरिकहरूले दैनिकजसो अकालमा मृत्युवरण गर्न परिरहेको छ । सडकको दुरावस्थादेखि चालकको लापरबाहीका कारण सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन् । सवारी दुर्घटनामा पैदलयात्रु समेत सुरक्षित हुन सकिरहेका छैनन् । नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउने पर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला र ?
बजारदेखि गाउँका सडकको अवस्था दयनीय छ भने बजारमा सडकसमेत सुरक्षित छैनन् भने पहाड र गाउँका सडकको अवस्था झन कहिले सुधार होला र ? दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम पनि भएको सुन्नमा आउँछ तर दुर्घटनाको अवस्था भने ज्यूँकात्यूँ छ ।
एकपछि अर्को ठुला दुर्घटना बढ्दै जाँदा गन्तव्यमा हिडेको यात्रु, पैदल हिडेको यात्रु असुरक्षित बन्दै गएको छ । सडकको संरचना सुधार हुन सकेको छैन् भने नियम विपरीत सवारी चलाउने सवारी चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना लिएर छोड्ने औपचारिकता मात्र पूरा गरेको छ ।
अब यतिले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ जस्तो लाग्दैन् मलाई त । दुर्घटनाको दर एकपछि अर्को गरेर बढिरहेको छ ।
सबै पक्षले दुर्घटना न्यूनीकरणमा औपचारिकतामात्रै पूरा गरेका छन् । जिम्मेवार कोही पनि नहुँदा समस्या झनै सिर्जना भएको छ । स्थानीय सरकार पनि सडक अवस्था सुधार गर्न, अव्यवस्थित बजार व्यवस्थापनमा कुनै ध्यान दिएको पाइदैन् । सरकारले ध्यान पु¥याउन नसक्दा पनि सडक अस्तव्यस्त बनिरहेको छ ।
सम्झौता अवधिमा सडक निर्माणको काम कहिले पनि सकिदैन् । निर्माण शुरू गर्ने तर समयमै निर्माणको काम सम्पन्न गर्न नसक्दा पनि दुर्घटनाको जोखिमहरू बढाएको छ ।
सवारी चालकले पनि सवार चलाउँदा होसियारी अपनाउन नसक्दा विभिन्न दुर्घटनाहरू हुँदै आएका छन् । बजारका सडकमा यत्रतत्र गरिएको व्यवसायले यात्रु हिड्ने ठाउँ पनि छैन् । जसका कारण पनि पैदलयात्रु सडकमा हिड्नुपर्ने बाध्यता र दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ ।
अव्यवस्थित रूपमा गरिने व्यवसायलाई व्यवस्थित गरी पैदलयात्री हिड्ने वातावरण सहजरूपमा व्यवस्थापन हुनुपर्छ । सडक निर्माण गर्दा नै पैदलयात्रु हिड्ने लेन नै बन्न सकिरहेको छैन् । पैदलयात्रुका लागि छुट्टै लेन बन्न नसक्दा पनि दुर्घटनाका जोखिम बढिरहेका छन् ।
भौगोलिक विकटताका कारण पनि सडकयात्रा असुरक्षित छ तर पनि सम्भव हुने ठाउँमा सडकका संरचना सुधार गर्न सकिन्छ । दुर्घटनाग्रस्त ठाउँको परिचान गरी संकेतबोर्ड राख्न जरूरी देखिन्छ ।
यसले पनि नयाँ सवारी चालकलाई सवारी चलाउँदा सहज हुनेछ । विद्यालय तथा बढी व्यस्त हुने ठाउँमा सवारीको पार्किङ व्यवस्थित बन्न आवश्यक छ ।
हामी सर्वसाधारण नागरिक पनि दुर्घटना न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छौँ । कुनै पनि सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकिरहेको छ भने सकेसम्म त्यस्तालाई निराकरण गरौँ, आफू पनि त्यस्ता सवारी साधनमा यात्रा नगरौँ । दुर्घटनाका कारण खोजी प्रतिवेदन तयारी गरी न्यूनीकरणका लागि आजैदेखि शुरूवात गरौँ ।